Aretina pesta : Tsy mandray andraikitra ny CUA -
AccueilSosialyAretina pesta : Tsy mandray andraikitra ny CUA
Aretina pesta : Tsy mandray andraikitra ny CUA
13/09/2017 admintriatra Sosialy 0
Ho ripaka eto avokoa isika mponina an-tanàn-dehibe noho ny tsy fandraisana andraikitra izay ataon’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo, tsy hita ihany koa ny minisitry ny Fahasalamana manoloana ny resaka mandeha sy tokony ho fampahalalana ny besinimaro. Raha ny fantatra dia efa misy dimy eo ho eo ireo izay voan’ ity aretina pesta ity, saingy mbola tsy misy ny filazana ofisialy izay tanterahin’ireo tompon’andraikitra. Afaka omaly raha ny fampitam-baovao azo dia efa nisy ny razana izay nalain’ny kamion’ny BMH teny amin’ny hopitaly, ary tamin’izany dia tsy nisy mihitsy ny fanazavana izay nomena. Inian’ny kaominina hafenina tsy ho fantatry ny besinimaro tokoa fa misy io aretina io, ary na dia ny minisiteran’ny Fahasalamana aza tsy naharenesam-peo. Madio ny tanàna, hetsika fanadiovana, hita etsy sy eroa ireo mpamafa lalana miaraka amin’ny borety sy ny fitaovam-panadiovana , saingy madio ivelany fotsiny ihany kay ny tanànan’ Antananarivo, ary mbola io indray ny aretina pesta fa mipoitra. Inona no tsy hitondran’ny ben’ny tanàna fanazavana satria dia fantatra izao fa kamion’ny BMH no nakana ny razana, sa iniana hafenina ka rehefa ripaka avokoa ny rehetra sy ho voan’ny aretina vao hihazakazaka. Toa tahaka ny tsy tompon’andraikitry ny tanàna i Ravalomanana Lalao fa ny ain’ny Malagasy eto ampovoan-tany no ataony kilalao, ingahy mpanolotsaina izay tena hianteherany moa izay variana amin’ny fampielezan-kevitra, ka miraviravy tanana ny ben’ny tanàna
Raha tsiahivina ihany koa dia efa nisy ny fanambarana avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana fa tsy hisy intsony eto afovoan-tany, na manerana an’i Madagasikara mihitsy izany aretina pesta izany, saingy indro anefa fa mipoitra indray, ary efa azo lazaina fa maro ihany no voany raha ny salan’isa tsy mbola ofisialy io no jerena. Ankehitriny anefa dia ny “peste bubonique” no fantatra fa nahavoa ireo maty teny amin’ny hopitaly, ka tokony hisy ny fanentanana sy fampahafantarana ny tokony hatao. Raha tena misy tokoa mantsy ny fandraisana andraikitra dia efa ny fisorohana izany aloha no tokony efa ho hitan’ny mponina, mba hanala ao an-tsain’ izy ireo ny fisafotofotoana. Na izany aza dia tsy tokony hiandry loatra ihany koa ireo tompon’andraikitra ny mponina satria dia efa ampototry ny loza mihatra, noho izany ny tsirairay dia tokony hanadio ny manodidina azy hialana amin’ny loto maro isan-karazany. Efa atomotra rahateo ihany koa ity ny fotoam-pahavaratra, izay fotoana fiakaran’ny voankazo, ary hampiakatra ny voalavo ihany koa. Noho izany ilaina ny fifampitenenana eo amin’ny fanajana ny fahadiovana, satria efa tsy hanao ihany ireo tompon’andraikitra.
« Fifosana anaty facebook” – HIAKATRA FITSARANA ANIO I HIARY RAPANOELINA